Dhagayso:-Dad Xoolo dhaqato ah oo Daacish Xoolo ka dhaceen degmada Qandala ee gobolka Bari. | Puntland Vision
Dhagayso:-Dad Xoolo dhaqato ah oo Daacish Xoolo ka dhaceen degmada Qandala ee gobolka Bari.
15 Luuliyo (Puntland Vision)—Degmada Qandala deegaano hoosyimaada ayaa laga soo sheegayaan inay xoolihii ay dhaqanayeen dadka reer guuraaga ah xoogag sheegtay inay ka tirsanyihiin Daacish oo dhawaan qabsatay degmada Qandala.
xoolo dhaqatada ayaa madaxda dawlada Puntland ugu baaqay sidii dhawaan ay ugu soo gurmadeen inay gurmad labaad ugu fidiyaan oo u bad baadiyaan xoolohooda.
Mid kamid ah Reer guuraaga oo Radio Garowe lahadlay ayaa sheegay inay Biyaha iyo raashinka ay kala degaayaan gadiidka iyo awrta sida ayna dadka waydiinayaan ciidamada Puntland halka ay saldhigyada ku leeyihiin.